Kutheni le nto iiComic typis typography zithiyiwe | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kutheni le nto iiComic typos typography zithiyiwe kangaka?
Ngendlela efanayo neHelvetica iye yaba yenye ye uninzi lwezinto ezibonisa impikiswano kwaye wonke umbulelo kubakhuseli nakwabagxeki; IiComic Sans ziye zaba yenye yeefayile ze- uninzi loonobumba abathiyiweyo kwilizwe loyilo lwegraphic.
Kakhulu kangangokuba kunokuthiwa ukuthiya olu hlobo lochwethezo kuyinxalenye yomsebenzi ofanayo kwaye kunzima ukufumana Umzobi wegraphic kubandakanya i-Comic Sans typography kwezinye zeeprojekthi zabo, hayi kuphela kuba bengayithandi, kodwa nangenxa yokuba iminyaka ethile a Ndikuthiyile ngaphakathi kulo msebenzi kolu hlobo lwefonti, ukuze ubugcisa bokuyila obusebenzisayo bunokubuzwa.
1 Kodwa kutheni le fonti icatshukelwa kangaka?
2 Uhlobo lwefonti enika umdlalo omncinci
Kodwa kutheni le fonti icatshukelwa kangaka?
Okwangoku kukho intshukumo ngokuchasene nale typeface eyaziwa njenge Ban yeeComic Sans, ekhokelwa nguDace kunye noHolly Combs, abaqulunqi babini abazinjongo zabo ziphambili kukuzama "ukumelana" ne ukungazi typographic, ukuvukela nokuchasa ukungcamla okungalunganga.
Izenzo zabaqulunqi bobabini zikwazile ukufikelela kuGoogle uqobo, kubani Bacele ukususa umxholo weComic Sans yemithombo ekhoyo xa ubhala i-imeyile. Kodwa kuvela phi oku kugatywa?
Ukuqala, kubalulekile ukwazi okuncinci ngembali yayo kwaye ifonti yeeComic Sans Uhlobo lochazo olwenziwe nguMyili weMicrosoft, UVincent Connare ngo-1994. Eyona njongo yokuchwetheza yayizakusetyenziswa kwiibhaluni ezibhaliweyo zeApp ezazijolise kubasebenzisi 3.1 Windows.
Unxibelelwano olonwabisayo lwenkqubo ekhankanyiweyo lwalufuna ifonti enokuhlengahlengiswa kwiimpawu zayo, kunye nokusondela, ukuthandeka kunye nokufikeleleka kwaba basebenzisi. Ukukufezekisa, Connare Ndithatha njengokhuthazo oluqhelekileyo lokuchwetheza kweehlaya, ekhokelele kwifonti enesiphatho esingaqhelekanga kunye nobuntwana, esikhawulezileyo sabandakanywa kwikhathalogu yefonti yeWindows 95.
IiComic Sans zezabasebenzisi enye indlela eyahlukileyo, ngokuchwayita ngaphezulu kwe Times New Roman kwaye kwakulomzuzu ukuba olu hlobo lohlobo lokubhala lwaziwe kwaye lusetyenziswe rhoqo kuyo nantoni na. Kule nkalo yokugqibela, apho i-mania yokuba abaqulunqi banalo kulo hlobo loqwalaselo lujolise, kuba Icala elingelilo ayisiyiyo ifonti, kodwa ukusetyenziswa okugqithileyo nokungachanekanga abasebenzisi abanike kona.
Sebenzisa iiComic Sans ukwenza iingxelo, iintetho zobungcali, ukukhutshwa, phakathi kwabanye, kucacile malunga impazamo engamkelekanga. Kuba akunakwenzeka ukusebenzisa uhlobo lochwethezo olunezikhumbuzo zomntwana xa ubhala iitekisi ezinobungcali nezinzulu hayi kwiincwadana ezinolwazi, kwimingcwabo, phakathi kwabanye.
Iindlela ezihlekisayo ayidalwanga ukuba isetyenziswe kuzo zonke izinto kwaye ingashicilelwa kulo naliphi na iphepha, endaweni yoko, yenzelwe ukuba isetyenziswe kwindawo yokuhlangana. Nangona kunjalo, ngelishwa kubantu abaninzi, namhlanje banokufumaneka naphina.
Uhlobo lwefonti enika umdlalo omncinci
Ngelixa inokubonakala ngathi typography entle kwaye imnandiKubalulekile ukuba wazi ukuba nini, njani kwaye ungayisebenzisa njani, nangona kunjalo njengoko besesitshilo, ukwaliwa ngokubanzi okuchaphazeleka ziiComic Sans kunjalo kukuba bonke abayili bamgxothile, ke ayifanelanga ukuba isetyenziselwe nokwenza izimemo zetheko lokuzalwa okanye ukubhala imiyalezo yabantwana.
Unokufumana imifanekiso kwi-Intanethi ebonisa izicatshulwa ezinje:Xa usebenzisa iiComic Sans, umyili wemizobo uphulukana namaphiko akhe”. Kodwa ngaphandle kwento yokuba yonke imihla abagxeki baninzi, kukho abantu abathile abakhusela lo mthombo.
Nangona kunjalo, kuyacaca ukuba ukwaliwa kunye nentiyo ekhoyo kulo mthombo iya kuqhubeka ikhula kwaye ibe yimpikiswano. Kuba nangona imalunga yisuse kwinqanaba lokuchwetheza, IiComic Sans ziya kuhlala ziyimbalasane.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Kutheni le nto iiComic typos typography zithiyiwe kangaka?
Kutheni ithiyiwe kangaka nje? Ngoba, ngoba? Ngoba….
UJuan Carlos Paz Martinez sitsho
Ndicinga ukuba iiComic Sans luhlobo oluhle lwefonti, kodwa ngenxa yemvelaphi yayo evela kwiikhomikhi, ayiniki mqondo wobuzaza, kwaye ndicinga ukuba seso sizathu sokuba ingasetyenziswa rhoqo, ngaphandle kokuba yintoni yenziwe into enxulumene nento ehlekisayo.
Phendula kuJuan Carlos Paz Martinez
URaul Botero sitsho
Inyaniso ibonakala kum «ukuxhaphaza», lutyekelo lwabantu abangenawo umsebenzi. Sonke siyawuthanda umthombo, kodwa njengabambalwa ekuqaleni, bathatha besithi bayithiyile, abantu abangenantloko bavele bazimanya nabo, kuba abantu kulula ukujoyina izinto ezingenamveliso kunokwenza izinto ezilungileyo. Kufana nomculo ka-Arjona, bendihlala ndiwuthanda, ngoku ikwayinto yokuwuthiya! Kwenzeka ntoni kuthi?
Phendula uRaúl Botero
Iicomic sans zithiyiwe ngenxa yomsebenzi onika ukubetha ngaphandle kwesandi
UJOSSELYN PATRICIA QUISPE GUILLEN sitsho
Ndiyakhumbula ukuba utitshala wam apho ndandifunda khona wandivimba kwaye waphantse wandiyeka ngenxa yokusebenzisa ii-comic sans, kwiprojekthi yam. Ukunyaniseka, andiboni nto iphosakeleyo ngayo. Ngokucacileyo ii-comic sans azizukuyisebenzisa kwileta yokugubungela, kodwa ayisiyi kuthiya kakhulu. Ngoku ndifunda iGraphic Design, kwaye nangona abanye abayili bandithiyile, ii-comic sans zezona zikhethiweyo endizithandayo ngaphambi kweentonga ezomileyo.
Phendula JOSSELYN PATRICIA QUISPE GUILLEN
Apha uya kuba ngowokuqala ukuzama ubeko olutsha lwe-YouTube!